Ukuphupha umyeni Discover ➡ Discover Online Online ➡️
Kumfazi ngamnye otshatileyo, umyeni udlala indima ebalulekileyo ebomini: wayenaye kwaye, okona kulungileyo, ekuphela kothando lokwenene ebomini, umntu lowo umfazi abelana naye ngayo yonke into kwaye efuna ukuguga. Ngokudibeneyo baya kumaxesha okonwaba, kodwa kunjalo namaxesha anzima. Kukho iimvakalelo ezinkulu ezinxulunyaniswa nomyeni uqobo, olucutshungulwayo kungekuphela nje ngokwazi kodwa kwinqanaba lokungazi. Ngenxa yoku, akuqhelekanga ukuba abafazi baphuphe ngendoda yabo. Kodwa nabasetyhini abangatshatanga okanye abangatshatanga banokubonwa ephupheni ecaleni kweqabane (elingaziwa ngokupheleleyo).
Kodwa athini la maphupha? Uphawu "lwendoda" kufuneka lutolikwe njani? Makhe sijonge amaphupha esihlala siba nawo neqabane ngaphambi kokuqhubela phambili kutoliko lwamaphupha ... Ngendlela, indlela yobufazi ihlala isetyenziswa kwisicatshulwa, kodwa kunjalo ukutolikwa kuyafana kumadoda amabini utshatile. Amagama enzelwe kuphela ukwenza kube lula ukuwafunda.
1 Uphawu lwephupha «umyeni»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Indoda iyafa kwilizwe lamaphupha.
1.1.1 Umyeni wam wasweleka, liphupha elibi kanjani elo
1.1.2 Phantse! Xa esi sibini siphantse safa ephupheni
1.1.3 Ukoyikeka kukothuka: iphupha lomyeni ngengozi ebulalayo.
1.2 Uyakopa! Umyeni njengomfanekiso wephupha elingathembekanga
2 Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umyeni»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Indoda iyafa kwilizwe lamaphupha.
Umyeni wam wasweleka, liphupha elibi kanjani elo
Ukuba iqabane lakho liswelekile ephupheni, ungakhanyisa ikhandlela elimhlophe engcwabeni lakhe, kufuneka uhlale uzolile okwangoku. Isimboli ayibonisi ukufa eyona ndoda izayo. Endaweni yoko, iphupha kufuneka libuze ukubuza iimvakalelo zikamyeni. Usamthanda? Ngaba ungathanda ukuqhubeka nokusebenza kubudlelwane bakho naye? Okanye sowuzihlukanisile naye ngaphakathi? Umfanekiso wephupha "umyeni uyafa" kukwenza ucinge.
Phantse! Xa esi sibini siphantse safa ephupheni
Esi sibini siphantse safa, kodwa sisaphila ekugqibeleni; Iphupha elinjalo ngokuqinisekileyo libangela iimvakalelo ezinamandla kumntu ophuphayo. Uziva usoyika, kodwa ekugqibeleni isiqabu. Umfanekiso wephupha ngokufuziselayo umele ukukhula. Umntu oleleyo ufumana amava amatsha nocelomngeni. Uyakwazi ukubalawula ngaphandle kokulahleka.
Ukoyikeka kukothuka: iphupha lomyeni ngengozi ebulalayo.
Amaphupha apho esi sibini sabulawa khona engozini, umzekelo kwingozi yemoto, sihlala sisazisa utshintsho olukhawulezileyo kubomi babo. Awunakho ukucwangcisa ingozi yendlela, yenzeka ngaphandle kwesilumkiso. Ngokungalindelekanga, umphuphi ufumanisa ukuba ujongene nezinto ezintsha kungekudala. Oku kunokutshintsha ubomi bakho bemihla ngemihla.
Uyakopa! Umyeni njengomfanekiso wephupha elingathembekanga
Ukuba umntu uphupha ukuba indoda iyaxoka kwaye iyakopela, ke oku kutyhila uloyiko lokwenene lokulahleka, ngokucacileyo olunxulumene nebali lothando. Umntu olalayo kufuneka athathe uphawu lwephupha lokuzonwabisa njengethuba lokujonga ukubaluleka kwakhe ukuze oyise ukungazithembi kwakhe. Ngokunokwenzeka kukho ukungazithembi kwaye iphupha elo lisoyika ukuqhathwa ngumyeni okanye inkosikazi yakho ngokuthandana.
Emva kwamava ephupha anje, umntu ekubhekiswa kuye makathathele ingqalelo ukuba ingaba iqabane kubudlelwane linganako na ukubanoxanduva okanye ingaba luloyiko lwabo olwenza ezo mvakalelo ngexesha lephupha.
Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokusisiseko, isebenza kumaphupha omyeni apho imeko yeemvakalelo eyaziva ephupheni ibaluleke kakhulu. Ukuba ubudlelwane buqondwa ephupheni buhambelana kwaye indoda iziphatha ngoxolo, ikwimo entle kwaye isempilweni, oku kufanekisela umtshato osebenzayo-kubomi bokwenyani, iphupha lihamba kakuhle nomyeni walo. Kukho iimpikiswano ezimbalwa kwaye akukho ngxaki ziphambili ekuhlaleni kunye.
Ngapha koko, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, la maphupha abhengeza ukuba Imvisiswano ziyaqhubeka ukubakho kwaye imeko ayizukutshintsha kwikamva. Okuchasene kuyinyani ukuba iphupha lilawulwa ziimvakalelo ezimbi, Oko kukuthi, ukuba umntu ekuthethwa ngaye uziva enexhala, lusizi okanye uloyiko. Kule meko, iphupha limele ukubonisa ukuba umtshato ukwakwinyani yobomi Imibuzo y Ukuchasana umnyama.
Nangona kunjalo, ukuba awuyiboni indoda yakho ecaleni kwakho ephupheni, kodwa eyomnye umfazi, kuya kufuneka uthathe oku njengesilumkiso: umntu ekubhekiswa kuye akanelisekanga kakhulu yimeko yakhe yobomi yangoku, usenokungamthandi iqabane lakho okanye ubandezeleke ngenxa yesinye isizathu. Umtshato. Ukongeza, kukho umngcipheko wokuba oku kungoneliseki kuya kuqhubeka ixesha elide.
Amaphupha apho umyeni wakhe akhangeleka egula okanye sele efile kufuneka ahlolwe kakubi. Ngokwenkcazo ngokubanzi, le meko ibonisa ukungalunganga kwaye impatho engafanelekanga Umfazi odlalwa ngumyeni, angamkhohlisa okanye amkhohlise.
Kuyafana ukuba umyeni uthanda omnye umfazi ephupheni: kukho umngcipheko wokuba naye uya kudinwa emtshatweni ebomini bokwenyani, ukrexeze kwaye ushiye iphupha. Ukuba ususa umsesane womtshato emnweni wakho ephupheni, ukungathembeki okwenziweyo kuya kuba neziphumo ezihle el mundo ukuvuka, umzekelo ukwahlukana kunye nokulahleka kwezinto.
Ingozi: Ukuze ukutolika ukukopa nokusilela komtshato wokwenene kusebenze, zonke ezinye iisimboli zephupha kunye nomyeni kufuneka zithethe into efanayo kwaye zikhombe kwicala, kwaye oku kunqabile ukuba kunjalo.
Ukuba umntu ophuphayo ufumana uqhawulo-mtshato ephupheni, umtshato wokwenyani unokuba sengozini, kwaye uloyiko loku lubonakaliswa ephupheni. Uqhawulo-mtshato lunokuphinda luvuselelwe kwisangqa sosapho okanye phakathi kwabahlobo.
Nabani na kamva odibana nomyeni wangaphambili ephupheni unokuphinda aphumelele ubudlelwane obudlulileyo kwixesha elidlulileyo kwaye afunde kwiimpazamo ezenziwe. Ukuba umntu uqhawule umtshato, engena engazi nto kumtshato wokugqibela.
Kukho amaxesha apho abafazi abangatshatanga ebomini benene baphupha ngokutshata. La maphupha enzelwe ukubonisa abo bachaphazelekayo ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba abanomdla ngokwaneleyo kumadoda kubomi bemihla ngemihla kwaye kungenxa yesi sizathu sodwa ingqalelo encinci wesini esahlukileyo.
Amava ephupha omyeni oswelekileyo nawo kunokwenzeka. Isimboli yephupha "umhlolokazi" ibonisa ukuba iphupha elo kufuneka liphele ngokuvuka ebomini ngombandela wexesha lakho elidlulileyo.
Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo, umyeni njengophawu lweli phupha uhlala ebonisa ukuba iphupha elo libubomi bokwenyani. engenabantu ndiziva, ndilangazelela inkampani kunye nomanyano. Ungahlala uziva ulahliwe (kunye neengxaki zakho kunye neenkxalabo).
Ukuba umntu ochaphazelekayo utshatile kubomi bokwenyani, amaphupha omyeni anokusetyenziswa njengophawu lwento yonke Ubomi bosapho ibonwe: Umyeni kule meko umele usapho lweli phupha. Engazi waqonda ukuba kufuneka anyamekele ngakumbi le ndawo yobomi.
Uphawu lwephupha «umyeni» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, umyeni ngumphelelisi we ukugqibelela, kuba kunye kuphela yindoda nomfazi abanokwenza umanyano lokomoya.